वीपी-माओ त्यो दुर्लभ वार्ता (पूर्ण पाठ)
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला
वीपीः (सगरमाथा) हिमालको चुचुरो चाहिँ? माओः त्यो पनि दुवै पक्षलाई आधाआधा। त्यसो गरे ठीक हुन्छ? यो सबै तपाईंहरुलाई दिँदा हामी दुःखी हुन्छौँ। यो सबै हामीलाई दिँदा तपाईंहरु दुःखी बन्नुहुन्छ। हामी यसको शिखरमा सीमा रेखा राख्नसक्छौँ।
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले ५९ वर्षअघि, १८ मार्च १९६० मा चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग भेटवार्ता गरे। भेटमा माओले चीनविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा निर्माण गर्ने भारतको प्रस्तावमा नेपाल सहमत नहुँदा खुसी लागेको मात्रै बताएका छैनन्, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई काठमाडौं निम्त्याउने कोइरालाको प्रस्तावमा धन्यवाद पनि दिएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको विवाद समाधान गर्न कोइरालाको अडानमा लचिलो पनि देखिएका छन्, माओ। वीपी र माओबीचको त्यो दुर्लभ वार्ता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो पुस्तक ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ मा प्रकाशित गरेको छ। वीपी–माओबीचको त्यो भेटवार्ता नै वास्तवमा यस्तो एउटा विन्दू थियो, जसले नेपाल–चीन सम्बन्धको जग बसाउने काम गर्यो। नेपालखबरमा करिब डेढ वर्षअघि प्रकाशित भएको पूर्ण वार्ताको नेपाली अनुवाद अहिले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पुनः प्रकाशित गरिएको छः
प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ
प्रकाशित: October 06, 2019 | 10:20:16 असोज १९, २०७६, आइतबार